I-Metal Zipper, i-Nylon Zipper, i-Plastic Zipper, i-Zipper Sliders
I-Metal Zipper, i-Nylon Zippers, i-Zipper yePlastiki, i-Zippers ixesha elide lokuthengisa
I-MH Zippers ixhuma wena kunye nathi. Sisebenzelana nazo zonke iintlobo ze-zippers njenge-nylon zipper, zipper zipper, zipper metal kunye namawaka ahlukeneyo. Ingeniso yonyaka ingaphezulu kwezigidi ze-10 yezigidi. Umagazini we-Zipper ufumanekayo kubhaliso lwabathengi.Ungaphinde ujonge iwebhusayithi yethu ye-Zipper ethi www.mh-zipper.com.
A: Iindlela eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukuqonda umgangatho we-Zipper
Ibhendi: Idayi yebhanki kufuneka ibe ngaphandle kwebala kunye nobuqhekeza, Ukuthinteka ngesandla, ivakalelwa i-Soft. Ibhande libukeka litshangatshulwa kwicala ngokubhekiselele.
Amazinyo: Ubume bamazinyo kufuneka bube buhle. Xa zisetyenzisiweyo, iintlawulo zityhila ngaphandle kwentsimbi.
Ubungqingili: Ubumba kufuneka buhambe ngokukhululekile kwaye ngokukhululekile, lufakwe kodwa aluyi kuvela.
Hem: Ingqungquthela ifanelana nebhodi ayiyi kuphula kwaye ivela. Icandelo elihlukanisayo leyunithi yokuhlukanisa kunye nokugcinwa kweyunithi yokwahlula: i-Square Bolt ingamkelwa ngokukhululeka.
I-Stop Stop: I-stop-top kufuneka ihlangane kunye nezinyo zokuqala kwi-zippers zensimbi kunye ne-wilon. Kodwa umgama awukwazi ukuba ngaphezu kwe-1 kwaye kufuneka uqiniseke kwaye ukhangele kakuhle.
Isimiso sokuphela: Umgca wezantsi kufuneka uhlangane namazinyo okanye ulungelelwe phezu komhlaba kwaye kufuneka uqine kwaye ukhangele kakuhle.
B: Iingcebiso zokukhetha i-Zipper
Iimpawu ezihlukeneyo zihambisana nezimo ezahlukileyo, ngoko ke xa kuthengwa i-zippers le micimbi elandelayo kufuneka ibhekiswe kumenzi:
1. Uza kusetyenziswa phi i-zipper (njengokuthi uhlambe isiqu sakhe, izicathulo, i-jackit, i-raincoat, itente, i-jeans efuna ukuhlamba kanzima kunye nemveliso yesikhumba nge-acidity ephezulu) okanye ezinye iimfuno ezizodwa ezizodwa.
2. iimfuno zomxholo okanye i-zipper: ayifuni iqulethe i-AZO okanye i-nickel kwaye idlulise umtshina wenaliti.
C: Ukunyamezela okuvumelekileyo kobude obude
Ngenxa ye-inertie ebangelwa yijubane lomsebenzi womatshini ngelixesha lokuvelisa i-zipper njengoko kuthanda ukuphelela kwamazinyo, kuya kubonakala ukunyamezela okuvumelekileyo.
Ukude i-zipper iyona mkhulu ivumelekile.
Iimpazamo ezibonelelwe nguMH zipper Iiposiso ezinikezwa ishishini laseJapan kwi-NEW Century Fair
ubungakanani Ukucacisa (mm)
Base Spec. unyamezelo
Ubude bobude (cm) U kuvunywa
ngezantsi kwe30 ± 5mm
30-ngezansi60 ± 10mm
60-ngezansi100 ± 15mm
ngasentla100 ± 3%
(Ukungabalulekanga) I-Zipper evulekile
(Ekwahlukileyo) Iindlela ezimbini ezivulekileyo
Zipper (ehlukileyo) I-Endlela yeVini eVala
Zipper O Tape I-Endlela yeVini eVala
Izindlela zokulinganisa i-Zipper
A = Ubude obude be-zipper
I-A1 = Yenza iteksi yentloko
A2 = I-back head tape
Isiphetho sokuvala Ukususela esiphelweni esiphambili sesilayidi ukuya kwi
I-Zipper evulekile Ukususela esiphelweni esiphambili sesilayidi ukuya kwi
ingongoma yesithuba esicacileyo.
Iindlela ezimbini ezivulekileyo zokuvala Ukususela esiphelweni esiphambili sesilayidi ukuya kwi
ingcambu yomgca wezantsi
Zipper ngeSlider Double
(Ukulungiswa kwiNtloko-Uhlobo) Ukususela esiphelweni esiphambili sesilayidi ukuya kwi
isalathisi sesiphakamiso sesinye sokuma.
Ulwalamano oluphantsi) Ukususela esiphelweni esiphambili sesilayidi ukuya kwi
Zippers ikhaya iindidi - Izikolo --Zizi --Ribbon & Tape - Imiba - Iindawo - Iifayile - Ukwazisa - I -Tassel ne-Fringe / Ukunciphisa - UkuFunda Izinto --Izixhobo kunye nezixhobo - Umshini wokuHlola kunye neengxenye --Fabric - Abanye Ngathi - MH Uqwalaselo - UMH Industrial --- Iifayili Zengxube I-Ribbon & Factory Factories --- iiLaces Factories - MH History - Bonisa iziboniso --Image Galleries - Ividiyo yeVideo Qhagamshelana nathi Indawo yeOffice --Feedback uluntu --Dibana nathi